नेकपाको जनवर्गीय संगठनको एकता जटिल बन्दै, भोलि फेरी बैठक बस्ने ! - नेकपाको जनवर्गीय संगठनको एकता जटिल बन्दै, भोलि फेरी बैठक बस्ने !
नेकपाको जनवर्गीय संगठनको एकता जटिल बन्दै, भोलि फेरी बैठक बस्ने !
२०७५, २७ भदौ, 04:15:33 PM
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सांगठानिक एकीकरणको कार्यलाई अघि बढाउने नीतिगत विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवामा बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सरसल्लाह र परामर्शअनुसार प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु भएको हो ।
सो बैठकमा अध्यक्ष द्वयले एकीकरणका कार्यलाई सम्पन्न गर्ने नीतिगत मान्यता प्रस्तावित गर्नुभएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रस्तुत मान्यता र मापदण्डमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई टुङ्ग्याउने दिशामा अगाडि बढेको छ ।
बैठकमा उठेका विषयमाथि थप परामर्श गर्न पार्टीले भोलि दिउँसो ३ बजे पुनः बैठक बोलाएको छ । जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि तल्लो तहको पार्टी एकता तीन महीनाभित्र गरिसक्ने भनिएपनि एकता प्रक्रिया भने जटिल बनेको छ ।